MARKA 11.12-26	F. 5 | Fitandremana Ankadifotsy
MARKA 11.12-26	F. 5
Mamoaza voa tsara. Rehefa noana i Jesoa dia nahatsinjo avy lavitra, aviavy iray mandravina ka dia nanatona (13). Ny fahitàny Azy dia toa misy voany kanjo tsy nahita afa-tsy ravina Izy. Tsy mbola fotoam-pamoazan’ny aviavy rahateo. Koa nozonin’i Jesoa ilay aviavy tsy misy voany: « Aza misy mihinana voa avy aminao intsony mandrakizay » (14).
Misy ny olona tahaka ity aviavy ity, izay toa mandrobona ivelany fa tsy ahitana voa. Toa hitan’ny olona fa mpivavaka tsara, miditra ho mpikambana amin’ny sampana isan-karazany ao am-piangonana sns.. nefa tsy ahitana voa.
Inona ilay voa? Galatiana 5.22 “Fa ny vokatry ny Fanahy kosa dia FITIAVANA, FIFALIANA, FIADANANA, FAHARI-PO, FAHAMORAM-PANAHY, FANAOVAN-TSOA, FAHAMARINANA” Manana ireo voa ireo ve isika? Amin’ny fotoana iray izay hanantenan’i Jesoa antsika, aoka anie hamoa voa tsara isika.
Manana finoana tsy miahanahana. Nony ampitson’ny nanozonan’i Jesoa ilay aviavy dia tsikaritra fa nalazo hatramin’ny fakany ilay izy, nihatra avy hatrany ny ozona nataon’i Jesoa. Eo amin’ny (23) i Jesoa dia nampianatra fa raha manana finoana an’Andriamanitra ny mpianatra ka tsy miahanahana ao am-pony, fa hino fa ho tonga ny zavatra lazainy dia ho azony izany. Ny (24) kosa no hilazany hoe: “Na inona inona tononinareo amin’ny fivavahana sy angatahinareo, dia minoa fa efa nandray ianareo, dia ho azonareo izany”. Ho raisintsika eo amin’ny fiainantsika koa izany hafatra izany. Zava-dehibe eo anatrehan’i Jesoa sady hampahomby ny vavaka ihany koa ny hamelantsika ny heloky ny olona ananantsika alahelo. Satria araka ny (26) raha tsy mamela heloka ianareo, ny Rainareo izay any an-danitra kosa tsy hamela ny helokareo.
Vavaka : Jesoa ô! Ampitoboy ny finoanay ary omeo hery izahay hahay hamela ny helok’ireo olona nanao izay nampalahelo anay. Amen!